MiniTool nkebi Iweghachite
Maara ihe Data Recovery
Paragon Nnapụta Kit
PC soja File Iweghachite
Naa, anyị agaghị echenwu ndụ anyị na-enweghị technology, karịsịa enweghị anyị onwe anyị na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ. On ndị dị ike ngwaọrụ anyị na-echekwa ezigbo mkpa data - si echeta na anyị achọghị ichefu nnọọ mkpa metụtara ọrụ akwụkwọ. Na mgbe ụfọdụ, na nzukọ n'aka nke ihe, ndị faịlụ nwere ike ina-ehichapụ.
Ị nwere ike ehichapụ faịlụ site onwe gị, mgbe ị nọ na-adịghị aṅa ntị. Ma ọ bụ ma eleghị anya onye ikwu gị ka ehichapụ ha na mberede. Ma ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ mere, draịvụ ike gị aghọwo rụrụ arụ. N'agbanyeghị ihe bụ ihe mere, e nwere nnọọ ụzọ dị mfe iji naghachi gị furu efu faịlụ ekele na witty emepụta nke gị sistemụ arụmọrụ na pụrụ iche ngwaọrụ. Mgbe ị na-ihichapụ a faịlụ site na kọmputa gị, ọ dịghị na-ehichapụ-adịgide adịgide. Ya nanị na-kpọrọ maka rewriting. Ya mere, faịlụ mgbake bụ na o kwere omume ma ọ bụrụ na ị họọrọ ka ihichapụ faịlụ na-adịgide adịgide ma ọ bụ ike mbanye na nke faịlụ na-echekwara na-ebibi.
Lee ndị top 10 undelete freewares nke ga-enyere gị naghachi furu efu faịlụ.
Recuva bụ otu nke kasị mma na nke kasị dị ike free undelete ngwaọrụ. E wezụga nke a, ọ bụ nnọọ mfe iji Recuva. Ị nanị nwere ịza ajụjụ nke a ọkachamara na-ajụ. Ajụjụ ndị bụ ndị dị mfe; ọkachamara-ajụ gị ihe ụdị faịlụ ị na-achọ na ebe ị chọrọ ịchọ faịlụ.
Ọ bụrụ na-eru gị ala na ya, ị pụrụ ọbụna iji Advanced ọnọdụ, nke na-enye ihe nhọrọ. Recuva bụ pụrụ ịdabere na ngwa ngwa software nke na-enyere gị naghachi fọrọ nke nta ọ bụla faịlụ ụdị.
Undelete 360 ​​bụ n'ezie a freeware nke a azụmahịa ngwaahịa. Ọ bụ ya mere ụfọdụ ndị na-ekpe, dị ka faịlụ nzacha. Nnukwu mwepu nke a freeware bụ ya ọsọ. Mgbe ụfọdụ, ndị scanning nwere ike weghara a otutu oge.
Otú ọ dị, undelete 360 ​​nwere ụfọdụ ndị ọzọ oké uru. Ọ bụ ike bulie faịlụ na ndị ọzọ mgbake ngwaọrụ-emekarị uche. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ọ bụ a freeware ị nwere ego nke na-agbake faịlụ bụ na-akparaghị ókè.
Nkebi nke 3 MiniTool nkebi Iweghachite
MiniTool nkebi Iweghachite bụ a pụrụ iche freeware maka agbake furu efu faịlụ. Ọ na-adịghị naghachi naanị faịlụ na ị na-efu. Ngwá ọrụ a bụ ike na-agbake dum efu nkebi.
Ọ dị mfe iji nke a software. MiniTool nkebi Iweghachite nanị kwesịrị ka a kwuru na mfịna mbanye, na mgbe ahụ, ọ ga iṅomi maka efu nkebi. Mgbe iṅomi na-okokụre, ị ga-enwe ike naghachi furu efu nkebi na oge.
Nkebi nke 4 Amamihe Data Recovery
Maara ihe Data Naghachi bụ ikekwe otu n'ime ndị kacha mgbake ngwaọrụ iji. E nweghị ndị na menus ma ọ bụ nhọrọ. Ị nanị ịhọrọ mbanye na ị chọrọ iṅomi ma mgbe ahụ na-eche maka ya pụta.
Otú ọ dị, nke a software na-adịghị aghọta ọ bụla mpụga draịva dị ka USB mbanye.
PhotoRec bụ nnọọ dị ike undelete ngwá ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ kasị faịlụ usoro na ọ bụ dakọtara na nta ọ bụla usoro (DOS, Windows, OS X, Linux, na ndị ọzọ).
Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-egwu ya DOS-dị ka interface. Ma, echegbula. N'agbanyeghị na ọ pụrụ anya mgbagwoju anya, nke a software dị mfe iji. Dị na-agụ ihe ọ na-ekwu na soro ntuziaka.
Nkebi nke 6 FreeUndelete
Ọ bụ ezie na ọ bụ a free software, FreeUndelete bụghị a dị nnọọ mma otu. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa, ịka nká ma free maka ojiji nkeonwe naanị. Nke a bụ eziokwu mgbe ọ na-abịa abụba draịva.
Ma, mgbe ọ na-abịa NTFS draịva, FreeUndelete gosiri ya uru. Ọ bụ nwee ike ịchọpụta ọtụtụ ehichapụ faịlụ. FreeUndelete awade ehichapụ faịlụ dị na nchekwa Ọdịdị, na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ị na chọta gị furu efu faịlụ.
Part 7 Paragon Nnapụta Kit
Ọzọ dị ukwuu free undelete software na anyị na ndepụta bụ Paragon Nnapụta Kit. Ngwá ọrụ a bụ nnọọ uru mgbe gị na PC agaghị buut mgbe niile. Paragon Nnapụta Kit Free abịa na ihe oyiyi nke ị nwere ike ọkụ ka CD. Mgbe ahụ, mgbe ọdachi etiwapụ, ị nanị buut si CD.
Nke a free software nwere ike omume-enyere gị aka idozi gị na kọmputa. Na kasị bụrụ dịruru ná njọ, ị ga-enwe niile gị faịlụ azọpụta.
Nkebi nke 8 Glary undelete
Glary undelete bụ nnọọ isi free mgbake software. Ị nanị nwere ịhọrọ a mbanye na ị chọrọ nwere scanned na mgbe ahụ na-eche maka ihe omume ịrụcha. Ya ọjọọ n'akụkụ bụ software si ọsọ, ebe ọ bụ iji nwayọọ karịa ndị fọdụrụ nke kwuru freewares.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ mgbakwunye, Glary undelete scores ihe A na fundamentals.
Part 9 Pandora Iweghachite
Pandora Iweghachite bụ oké undelete freeware nke awade faịlụ mgbe ha a hụrụ.
I nwekwara ike ịchọgharị na faịlụ na Explorer-dị ka nchekwa echiche ma ọ bụ na-aga n'ihi a ngwá ọrụ nke nzà faịlụ site aha, size, e kere eke na "ikpeazụ gbanwetụrụ" ụbọchị.
Part 10 PC soja File Iweghachite
PC soja File Iweghachite bụ a freeware nke nwere ike inyere gị aka naghachi gị furu efu faịlụ si ma abụba na NTFS draịva. Faịlụ na-adade ke mfe nchekwa ele.
Ọ bụ obere iberibe na ihe omume ahụ ike ihuchalu faịlụ dị ka ederede ma ọ bụ a hex dump, ma agaghị ịhụchalụ JPEGs. PC soja Njikwa Iweghachite bụ ezi freeware ma ị ga mkpa ụfọdụ ndidi tupu ị na-enwe ike zuru uru nke ya.
Niile kpọtụrụ aha na mbụ undelete softwares dị mma, ma mgbe ụfọdụ ha nwere ike ọ gaghị enwe ike ịchọta na naghachi ụfọdụ nke gị faịlụ. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-adịghị na bụghị otú mfe iji. Wondershare Data Recovery Bụ ike na ọkachamara ngwá ọrụ nke dị oké ngwa ngwa na pụrụ ịdabere na. Ọ nwere ike na-agbake fọrọ nke nta niile nke gị faịlụ, ọ bụla na mbanye.
The software dị mfe iji, ma na ị nwere a Ọkachamara na-eduzi gị site na mgbake usoro. Ị na-adịghị eme ihe ọ bụla, e wezụga ịhọrọ ndị gị na mbanye (ma ọ bụ i nwere ike iṅomi niile draịva) na faịlụ ụdị (ma ọ bụ họrọ niile faịlụ na ụdị). Ị nwere ike ịnwale Wondershare Data Recovery for free, si ya ukara website.
Software Akwado ụdị faịlụ Speed Akwado Devices Nyiwe Ahịa
Recuva Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Fast NTFS na abụba Windows Free
Undelete 360 Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Fast NTFS Windows Free
MiniTool nkebi Iweghachite Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Nkezi Speed NTFS Windows Free
Maara ihe Data Recovery Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Nkezi Speed NTFS Windows Free
PhotoRec Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Fast NTFS Windows, Linux, OS X Free
FreeUndelete Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Fast NTFS Windows Free
Paragon Nnapụta Kit Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Fast NTFS / td> Windows Free
Glary undelete Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Ngwa ngwa NTFS na abụba Windows Free
Pandora Iweghachite Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Fast NTFS Windows Free
PC soja File Iweghachite Fọrọ nke nta ọ bụla akwụkwọ, Image na Video File Ụdị Ngwa ngwa NTFS na abụba Windows Free
Wondershare Data Recovery Ọ bụla Nnọọ ngwa ngwa Fọrọ nke nta niile ngwaọrụ Windows, OS X Free Trial / $39.95 ndụ License
> Resource> Free> Top 10 undelete Freewares Iji nyere gị aka Naghachi Lost Files